Zanu PF Yopinda Mumatunhu Ichiedza Kugadzirisa Zviri Kunetsa
WASHINGTON DC — Chikwata cheZanu PF chiri kutungamirwa nasachigaro webato iri, VaSimon Khaya Moyo, icho chiri kutenderera nematunhu ose mukuyedza kugadzirisa kusawirirana kuri mubato iri, chapinda mudunhu reMidlands, uko chinonzi chasangana nehutungamiri hwedunhu iri.
Hatina kukwanisa kunzwa zvabuda mumusangano uyu, Asi zvinonzi mudunhu iri, semamwe matunhu, mune kusawirirana kunonzi kuri kukonzerwa nezvikwata zvinonzi zviri mubato iri zviri kurwira masimba.
Hatina kukwanisawo kubata mutauriri weZanu PF, VaRugare Gumbo, avo vapindawo musangano uyu, sezvo nharembozha yavo yanga isingasvikiki.
Mutevedzeri wemukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZanu PF, VaPsychology Maziwisa, vanotiwo havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vari vatete.
NeChitatu chikwata ichi, icho chinosanganisira VaSydney Sekeramayi, VaWebster Shamu naVaDidymus Mutasa, chakanga chiri mudunhu reMashonaland East uko kunonzi kune dzimwe nhengo dzebato iri dzakatotanga kare kutsvaga rutsigiro dzisati dzapiwa mvumo nebato.
Chikwata ichi chiri kutarisirwa kupinda mudunhu reMatabeleland North neChishanu chopedzisira nekuMatabeleland South neMugovera.
Zanu PF yakatuma chikwata ichi kuti chigadzirise zvinetswa zviri mubato iri izvo zvinonzi zvatadzisa kutarwa kwezuva rekuita sarudzo dzekutsvaga vacharimirira musarudzo.
Asi zvinonzi kune vamwe vasiri kuwirirana nechikwata ichi sezvo vachiona sechakarerekera kune rimwe divi muZanu PF umu.
Politiburo yebato iri yaifanirwa kusangana svondo rino asi izvi hazvina kuitika sezvo mutungamiri webato iri, VaRobert Mugabe, vari kuJapan.
Asi nyanzvi munezvematongerwo enyika, uye vachitungamira sangano reCentre for Community Development in Zimbabwe, VaPhilip Pasirayi, vanoti chikwata ichi chiri kungogadzirisa zviri pamusoro chete, sezvo pasi paine kusawirira kukuru kuri kukonzerwa nezvikwata zvinonzi zviri mubato iri.